"सुन्नुस् न ! केटाकेटीहरु सडकमा जालान हेर्नुस् है । म पानी थाप्न हिंडेँ ।" सुन्तली गाग्री च्यापेर निस्की । पिँढीमा खाल जमाइ रमिरहेका उसका बुढोका आंखा आफ्नो तासका पत्तीबाट हटेका होइनन् । "कति फत्फत् गरिरहन्छे" पत्ती तान्दै उसले सोच्यो । केटाकेटीहरुका लागि आंगन भन्नु नै सडक । खेल्दाखेल्दै दुवै वीच सडकमा पुगेछन् ।
क्या……च्च । गाडीले ब्रेक हान्यो । ब्रेक हान्दा हान्दै पनि पांग्राले सुन्तलीको छोरालाई भेट्टाइ हाल्यो । गाडीले किच्यो, गाडीले किच्यो …छिनमै होहल्ला भयो ।
" नछोड् । गाडी रोक् । ड्राइभरलाई जान न दे । हाम्रो बच्चा मार्ने ज्यानमारालाई छोड्दैनौं ।" भीडले गाडी छोपिसकेको थियो । ऊ पाखुरा सुर्कदैं भीडमा सवैभन्दा अगाडि थियो ।
"हेर्नुस् हाम्रो मात्र दोष हैन । बच्चा एक्कासी वाटो वीचमा आइ पुगेको थियो । रोक्दा रोक्दै पनि…… " ड्राइभर हेर्दा सोझै देखिन्थ्यो ।
"हाम्रो बच्चालाई खेल्न आंगन बनाइ देऊ न त, अनि सडकमा जांदैनन् । जो चोर उसैको � ूलो स्वर हिँड्नुस् थाना ।"
उसको उग्र रुप देखेर ड्राइभर आत्तियो "हेर्नुस्, म पनि विरामी मान्छे लिएर हिँडेको छु । बेलैमा अस्पताल नपुगे अप्� यारो हुन्छ मलाई । कुरालाई मिलाउन खोजौं, किन थानासम्म जाने ?"
"यसो क्षतिपूर्ति दिएर कुरा थामथुम पारे त भैहाल्यो नि ।" गाउंका एकदुइ टा� ाबा� ाले सुझाए ।
"म त दश लाख भन्दा एक पैसा कम लिन्न । छोरो पो मरेको, अरु हो ? बांचेको भए पढेर लाखौं कमाउंथ्यो ।"
"दश लाख त गाह्रो पर्छ । आमालाई ओखती गर्नै बांकी छ । अलि कम गर्नुस् ।"
"आ� लाख दिनुस् । मान्छे पो मरेको के कुनै कुखुरा हो ?"
"दुइ लाखमा मान्नुस, मलाई हतार भैसक्यो ।"
"सांढे दुइ लाख । यो भन्दा बढी क्यै गरी दिन सक्दिन ।" ड्राइभरले हात जोड्यो ।
"आ…मा… " सडकमा पछारिएको बच्चोको मुखबाट अस्पष्ट र शिथिल आवाज आयो । घुंडा घिस्रिएर रगत बगेको रहेछ । व्यर्थ वादविवादमा दुवैले समय खर्चे । बच्चोलाई उ� ाएर गाडीभित्र राख्दै ड्राइभरले उसलाई पनि भित्र बस्न अनुरोध गर्यो "ल हिँड्नुस्, अब थाना हैन अस्पताल जाने ।" सुन्तलीका बुढा लुसुक्क गाडीभित्र पसेर घाइते छोरासंग बस्यो ।